I-Australia iphinda ivule imida emva kweenyanga ezili-18 zokuvalelwa yedwa kwi-COVID-19
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-Australia eziQhekezayo » I-Australia iphinda ivule imida emva kweenyanga ezili-18 zokuvalelwa yedwa kwi-COVID-19
Airlines • isikhululo • Iindaba zase-Australia eziQhekezayo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
I-Australia iphinda ivule imida emva kweenyanga ezili-18 zokuvalelwa yedwa kwi-COVID-19.
Ngaphandle kwemida yamazwe ngamazwe ivulelwe abantu base-Australia eVictoria naseNew South Wales (NSW) kunye ne-Australian Capital Territory, ilizwe lisavaliwe kubakhenkethi bangaphandle, ngaphandle kwabo bavela kummelwane waseNew Zealand.
Urhulumente wase-Australia uze nenye yezona mpendulo zinzima kulo bhubhani, wavala imida yelizwe kwiinyanga ezili-18 ezidlulileyo.
Iinqwelomoya zamazwe ngamazwe ezisuka eSingapore naseLos Angeles, eU.SA zaqala ukumisa eSydney.
Bamalunga ne-1,500 abakhweli ekulindeleke ukuba babhabhe baye eSydney naseMelbourne ngosuku lokuqala lokunciphisa izithintelo.
Abemi baseOstreliya abagonywe ngokupheleleyo baye bakhanyiselwa ngabasemagunyeni kurhulumente waseOstreliya ukuba baye phesheya ngokukhululekileyo ngaphandle kwemvume ekhethekileyo okanye isidingo sokuvalelwa bodwa xa befika, ukuqala nge-1 kaNovemba.
Ilizwe liyiyekisile imida yalo engqongqo yemida yamazwe aphesheya namhlanje, livumela iintsapho ezininzi ukuba zihlangane emva kweentsuku eziphantse zibe ngama-600 zahlukene kwaye zibangele ukuba kubekho iimvakalelo kwizikhululo zeenqwelomoya eSydney naseMelbourne.
Intshukumo iza kakhulu Ostreliya Ukutshintsha ukusuka kwinto ebizwa ngokuba yi-COVID-zero-qhinga-qhinga lokulawula ubhubhane ukuya ukuphila nentsholongwane phakathi kwephulo elikhulu lokugonya. Bangaphezu kwama-77% abo baneminyaka eli-16 nangaphezulu kweli lizwe abazizigidi ezingama-25.9 baye bazifumana zozibini izithonga zejab ukuza kuthi ga ngoku, isebe lezempilo lathi.
Urhulumente wase-Australia uze nenye yezona mpendulo zinzima kulo bhubhani, wavala imida yelizwe kwiinyanga ezili-18 ezidlulileyo. Bobabini abemi kunye nabahambi bamazwe angaphandle bathintelwe ukuba bangene okanye baphume ngaphandle kwelizwe ngaphandle kokukhululwa. Le ntshukumo yahlula iintsapho nabahlobo, ishiya abantu abaninzi baseOstreliya bengakwazi ukuya kwimisitho ebalulekileyo, imitshato okanye imingcwabo.
Ekuseni ngoMvulo, iinqwelomoya ezisuka Singapho kunye neLos Angeles babeqala ukufika eSydney, Ostreliya. Abakhweli abafikayo bathi uhambo lwabo “luloyikeka kancinane kwaye lunika umdla” kwaye bachaza imvakalelo yokugqibela yokukwazi ukubuyela ekhaya emva kwalo lonke eli xesha “njenge-surreal.”